साउदी अरबमा अवैधानिक बिदेशी कामदारलार्इ ९० दिने आममाफी. – Sabaikoaawaj.com
साउदी अरबमा अवैधानिक बिदेशी कामदारलार्इ ९० दिने आममाफी.
सोमवार, चैत्र ७, २०७३ 9:50:48 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं ,७ चैत/ साउदी अरब सरकारले अवैधानिक रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई ९० दिने आममाफी दिने घोषणा गरेको छ । यो चैत १६ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
यसअघि ३ वर्ष पहिले यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा करिब २५ लाख मानिसले साउदी छोडेका थिए
प्रकाशित मितिः सोमवार, चैत्र ७, २०७३ 9:50:48 PM